Warshadaha Lafaha ee Shiinaha iyo Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Baxnaaninta iyo Jimicsiga > Lafaha iyo Lafaha go'an
Qalabka lafaha iyo lafaha go'an, oo sidoo kale loo yaqaan qalabka lafaha lafaha, waa qalab taageero dibadda ah oo loogu talagalay in lagu yareeyo hawlgabka addimada, lafdhabarta iyo habka muruqyada lafaha. Xirmooyinka lafaha waxay caawiyaan ilaalinta kaaliyaha ee kala-goysyada iyo addimada.
Codsiga lafaha iyo dhabarka go'an ayaa suurtogal ka dhigaya in laga soo kabsado dhaawacyada lafaha iyo xubnaha ka dib. Biraha, oo sidoo kale loo yaqaan aaladaha lafaha, waa aaladaha taageerada dibadda ee ujeeddada lagu dhimayo cilladda addimada, laf dhabarta iyo nidaamka muruqyada lafaha. Hawlaha taageeradu waa: 1. Xasilooni iyo taageero .
Dhakhaatiirta lafaha iyo Lafaha Fixed waxay bixiyaan daaweyn badbaado leh oo la isku halleyn karo oo loogu talagalay dhakhaatiirta lafaha, taas oo aan ka dhigin oo kaliya heerka caafimaad ee heerka sare ee caalamiga ah, laakiin sidoo kale waxay hubisaa tayada iyo saameynta qalliinka, kana fogaato khilaafaadka caafimaadka. Codsiga gudaha ee laabta qufulka lagu hagaajin karo, ACL/PCL laabta gaarka ah, laabta laf dhabarta ilmagaleenka la hagaajin karo oo la hagaajin karo, laabta suxulka la hagaajin karo, lugaha iyo canqowga go'an, iwm, waxay si wax ku ool ah kor ugu qaadi kartaa daaweynta aan qaliinka ahayn ee cudurrada lafaha iyo lafaha dhaawacyada iyo soo kabashada shaqada mootada ka dib qalliinka wadajirka ah, taas oo muujisay in ay ka sarreyso daaweynta.
Barkinta Caafimaadka, waa in lagu tilmaamo barkinta caafimaadka ee leh saameyn daryeel caafimaad gaar ah, waxay yeelan kartaa neerfaha qaboojiya, degenaansho, ilaaliso laf dhabarta ilmo-galeenka iyo wixii la mid ah. Barkinta caafimaadku waa in ay si adag uga shaqeysaa qaab dhismeedka iyo shaqada, qaab dhismeedka macquulka ah oo aadminimo ka badan, ayaa runtii door ka ciyaari kara daryeelka caafimaadka. Marka loo eego aragtida daawada dhaqameed ee Shiinaha iyo isticmaalka dadweynaha ee caddaynta: gypsum qabow, isticmaalka qashinka gypsum iyo koollada waxay noqon kartaa xakamaynta kulaylka qabow cadaadiska dhiigga, u hoggaansan isticmaalka cadaadiska dhiigga si tartiib tartiib ah loo yareeyo heerka caadiga ah.
Barkimo Xumbo Xumbo Xasuusta Side Hurdada
Dhinaca ergonomic ee hurdada xusuusta qoorta xumbo barkimo waa barkimo lagu sameeyay isbuunyo jilicsan halkii laga heli lahaa baalal goose ama walxo kale. Mid ka mid ah barkimooyinka xumbo ee ugu caansan waa kuwa ka buuxa waxa loogu yeero xumbo xusuusta. Barkinta xumbo-xumada ee caadiga ah ayaa inta badan ah doorasho aad u fiican dadka xasaasiyadda qaba ama kuwa u baahan barkimo la isku daray si ay u helaan taageero joogto ah.
Qalabka Lafaha lafdhabarta
Qalabka Lafaha lafdhabarta waxaa loola jeedaa isku dhafka lugaha, jirridda iyo qaybaha kale ee qalabka dibadda, ujeeddadeedu waa in laga hortago ama la saxo qallafsanaanta lugaha, jirridda ama daaweynta cudurrada lafaha iyo muruqyada dareemayaasha iyo magdhowga shaqadiisa.
Qalabka Lafaha ee Lugaha Hoose
Qalabka Lafaha ee Lugaha Hoose waxaa loola jeedaa isku dhafka lugaha, jirridda iyo qaybaha kale ee qalabka dibadda, ujeeddadeedu waa in laga hortago ama la saxo qallafsanaanta lugaha, jirridda ama daaweynta cudurrada lafaha iyo muruqyada dareemayaasha iyo magdhowga shaqadiisa.
Qalabka Orthopedic ee Lugaha Sare
Qalabka Lafaha Sare ee Lafaha waxaa loola jeedaa isku xirka addimada, jirridda iyo qaybaha kale ee qalabka dibadda, ujeeddadeedu waa in laga hortago ama la saxo qallafsanaanta addimada, jirridda ama daaweynta cudurrada lafaha iyo muruqyada dareemayaasha iyo magdhowga shaqadiisa.
Kabka farta waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo farta dhaawacantay. Ujeedada ugu weyn ee kabitaanka ayaa ah in farta la ilaaliyo oo laga ilaaliyo farta inay foorarsato. Intaa waxaa dheer, waxay ka caawin kartaa farta dib u soo celinta dhaqdhaqaaqa ka dib arthritis-ka, qalliinka, qalliinka, iwm., waxay keentay farta inay laabato, ama sababo kale. Kabiyeyaasha faraha macmalka ah waxay badanaa ka samaysan yihiin bir ama caag. Kabiyeyaasha guriga lagu sameeyo waxaa laga samayn karaa ku dhawaad ​​shay kasta oo fidsan, oo ay ku jiraan alwaax.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Lafaha iyo Lafaha go'an oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Lafaha iyo Lafaha go'an soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Lafaha iyo Lafaha go'an la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.